Zuva: Chivabvu 20, 2020
Vanhu Vanopfuura makore makumi matanhatu neshanu vachakwanisa kuenda kunyika yavo vaine mvumo
Minister Koca, mumashoko avo mushure memusangano weSainzi Committee, wakabata pamamiriro ekufambisa kwevanhu vanopfuura makore makumi matanhatu nemashanu. "Vagari vedu vanopfuura makore makumi matanhatu neshanu vachakwanisa kuenda kunyika yavo kwemwedzi mumwe vaine mvumo." Uchishandisa mazwi Koca, [More ...]
Kudya Kwekati Cat
Vanosvikirwa nekatsi zvisikwa zvinogara musango. Nekudaro, kugona kwavo kudzamisa urini kwakavakirwa kubvisa kurasikirwa kwakawanda kwemvura uye kugonesa muviri kuchengetedza mvura. Nekudaro, kugona uku kunowanzoshandiswa mukaka. [More ...]
Mhedzisiro yeCovid-19 pane Eskişehir Industry
Pamusangano we "Industry Council" wakarongwa naEskişehir Organised Industrial Zone Directorate, matambudziko akasangana nevanoona maindasitiri panguva yehurongwa hweconavirus (Covid-19) nemhedzisiro yehutachiona hwehupfumi hwakakurukurwa. Maindasitiri anozivikanwa naEskişehir Akarongeka Maindasitiri Zone Directorate [More ...]
AFAD Junction Kugadziridzwa
Samsun Metropolitan Municipality yaita gadziriro nyowani muAFAD Junction kuitira kuti ipe vagari zvakanaka zvekufambisa, zvakanaka uye zvakanaka. Samsun Metropolitan Municipality, iyo inoenderera mberi nemabasa ayo kuitira kuti kuitisa kufamba kusingakanganiswe, Recep [More ...]
Izmir Metropolitan Municipality yakakurumidza kuvandudza mugwagwa nekugadzirisa mabasa mukati memazuva egorona. Muchiitiko ichi, zvikwata zvemadhorobha zvakashandisa anosvika zviuru mazana matanhatu nemakumi manonwe matani easphalt uye mazana zviuru mazana maviri emamirimita emamepu e paracheni coating zvinhu muguta. [More ...]
140 zviuru Masks kubva Izmir Metropolitan kune Dunhu reMadunhu
Izmir Metropolitan Municipality yakafunga kupa rubatsiro rwemasuru kune vematunhu mushure mekushandiswa kwemasiki ne İzmir General Sanitary Board yakazviita mudunhu rose. Kugovera mamirioni mazana maviri emamaki kune vagari kusvika pano [More ...]
Tsvina Yezvekudya Inenge Yadzivirirwa neChengetedzo Yekudya Campaign
Turkey, chirongwa chakakura mukurwisa kupererwa nechikafu uye marara ari kuita. Zvekurima, nerutsigiro rweUnited Nations Chikafu neCommandity Organisation (FAO), "Chengetedza Chikafu, Chengetedza Tafura Yako" [More ...]
Gurukota rezvemaindasitiri nehunyanzvi, Mustafa Varank akataura kuti kupora kuri muboka chairo kwatanga uye zvikwangwani zvakanaka zvasvika ndokuti, "Ita shuwa, izvi zvichaita kuti indasitiri yedu irambe yakasimba kukunda marudzi ese ekuvhunduka uye kumira mune chero mamiriro ezvinhu." [More ...]
1 Nhau dzakanaka dzeVari Kupinda mu3Mirioni Software Software Kusimudzira
Gurukota rezvemari uye rezvemari Berat Albayrak akagovana vhidhiyo kubva kwaari Twitter account nekuda kwe 19 May Kurangarira kweAtatürk, Vechidiki neMitambo Zuva. Gurukota Albayrak, kubuda kwaMustafa Kemal Atatürk kuenda kuSamsun uye chiratidzo chekurwira kwenyika [More ...]
Chii chinonzi ePttAVM Store? Sei ePttAVM Inoshanda? Maitiro ekuvhura iyo ePttAVM Chitoro?
PttAVM Kuvhura Chitoro / EPttAVM ndizvo zvese zvaunoshamisika nezvekutengesa mune ino e-commerce giya. Makambani anotengesa EPttAVM, ane zvitoro zvepanyama kana kuti anoda kutengesa online [More ...]
Kechishanu, UIC yakarongedza kukwikwidza kwemifananidzo kuti ishandiswe mune yekarenda ya2021. Zvitima zvejanji kubva kuAsia Pacific nyika zvichave zvichikwanisa kutora makwikwi aya. Mapikicha makumi maviri achasarudzwa uye akadhindwa pane iyo UIC 20 kalenda, uye iyi kalendari ichave iri [More ...]
Mumwe Discovery Sarudzo YeKanal Istanbul
Dare Gumi rekutonga reIstanbul, mudare rakamisikidzwa naHalk Evler vachipokana nekuvakwa kweKanal Istanbul Project, nechikumbiro chekubvisa iyo Environmental Impact Ongororo (EIA) Positive Report yakapihwa Ministry of Environmental and Urbanization, [More ...]
Ataköy İkitelli Metro Mepu, Nzvimbo uye Maitiro
Mutsetse apo Emay Engineering uye Kubvunza, iyo yakashandurwa neIstanbul Metropolitan Municipality, inoitisa basa rekutarisa chivakwa uye basa rekuvaka raAga Energy; Iyo inenge 13,5 km kureba uye iine gumi nemaviri nhepfenyuro. Line rako rakakwana [More ...]
Ekrem İmamoğlu, Meya weIstanbul Metropolitan Municipality (IMM), vakapinda muchirongwa chekubikira njanji yakarongedzerwa Ataköy-İkitelli Metro, iyo ichave yakabatanidzwa nemitsara mina yemetro inoshanda muguta uye Marmaray. İkitelli Indasitiri [More ...]
Rail welding mhemberero yeAtaköy - Basın Ekspres - İkitelli Metro Line, iyo kuvakwa iyo yakatanga muna 2016, yakaitwa pamwe nekupinda kweEkrem İmamoğlu, iye mukuru weIstanbul Metropolitan Municipality (İBB) uye wedunhu Bureaucrats. Ataköy - [More ...]
Chii chinonzi 1 Miriyoni Software Software Kusimudzira, Sei Kunyoresa?
Zvishandiso zvinopfuurira kune mamirioni 1 software ekuvandudza. Avo vanoda kuzvivandudza pachavo mumunda wesoftware munzvimbo dzeruzhinji uye dzakazvimirira vanogona kunyorera 'miriyoni imwe software vanogadzira' pamhepo. 1 miriyoni kudzidziswa anopihwa kuburikidza BTK Academy [More ...]
İlber Ortaylı ndiani?
Musi waMay 21, 1947, Crimean Tatar akaberekerwa kumhuri muBregenz, Austria. Akatamira kuTurkey nemhuri yake aine makore maviri. Akapedza chikoro chake chepuraimari uye sekondari muIstanbul Austrian High School. [More ...]
Kubatana kweEskişehir kune maDoko nekukurumidza
Eskişehir OSB Mutungamiri Nadir Küpeli akataura kuti vakamirira matanho achatorwa neTCDD pakuvakwa kwechiya chegumi nemakiromita echitima pakati peHasanbey Logistics Center ne OSB. Küpeli yakakosha kune indasitiri yeEskişehir [More ...]
Nzira Shanduko Nekuda Kwekuvaka kweMetro Line muDarıca
Darıca Fevzi Çakmak Mahallesi, Cevahir Street, ichavharwa kune motokari yekufambisa mukati mechikamu chebasa rekuvaka kweInstitute Investment Darıca Gebze Metro mutsara. KUSANGANA RUDZIMA RUCHashandisirwa Dare Guru reDziviriro Investment Darıca - Gebze [More ...]
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. T-129 ATAK Inotsamwisa uye Tactical Reconnaissance Helikopta, yakagadziriswa na (TUSAŞ), yakaita nendege yakakosha kuna Chivabvu 19, Kurangarira Atatürk, Vechidiki neMitambo Zuva. Turkish Anga uye [More ...]
Mutoro wekupfeka Mask muIzmir
MuIzmir, danho rakatorwa neProvince General Hygiene Board rakaita kuti zviite kushandisa masks mumatunhu makumi matatu uye mukati meguta rose. Mune chirevo chakaitwa neHurumende yeIzmir, "Guta Redu Rokuchengetwa Ehutsanana Board, Nhamba 30" Mutemo weHutano hweHuzhinji. [More ...]
Ilısu Damu Kupa 2,8 Lira Kupa kwehupfumi
Turiki yekutanga yeIlısu Dam Power Plant yakapinda basa nemhemberero yakapindwa nemutungamiri wenyika Recep Tayyip Erdogan kuburikidza nemusangano wevhidhiyo. Gurukota rezvekurima uye Masango Gurukota rezvemagetsi uye Natural Natural neBekir Pakdemirli [More ...]
LGS May 2nd Seka Mubvunzo Mubhuku rakabudiswa
LGS May 2nd Seka Mubvunzo Mubhuku Rinobudiswa; Ministry of National Education Ziya Selçuk akati mune chirevo kuti kune vadzidzi vari kugadzirira bvunzo yeChikoro cheKusvika High, bvunzo yemuenzaniso rwechipiri yaMay. [More ...]
Turkey yemakore makumi manomwe yekurota neIlisu Dziva Yakavhurwa
Gurukota rezvekurima uye Masango Bekir Pakistani [More ...]
Rubatsiro rweMabasa emaBrands muTurquality Support Chirongwa Yapera
Gurukota rezvekutengeserana Ruhsar Pekcan akataura kuti mabasa anoitwa kuitira kutsigira mhando mu "Turquality Support Program" yezvikamu zvevesevhisi nehurongwa hwakavakirwa pachishandiswa "musika wekutengesa", ndokuti, "Zvigadzirwa zvedu zviri mubato revashandi ndizvo. [More ...]